Tenga Kupenya & Kuderera Pore Elastic Kuomesa Avocado Face Serum - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
Kuvhenekesa & Kuderera Pore Elastic Moisturizing Avocado Face Serum
Kuvhenekesa & Kuderera Pore Elastic Moisturizing Avocado Face Serum yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Kudya: Hyaluronic acid
Muenzaniso Nhamba: 81213
Chimiro: Chiso Serum
Chitupa Nhamba: 20170506
Feature: Kunyorova uye kugadzirisa, kupa mvura kubatsira kuvandudza ganda rakaoma, kuita kuti ganda rako ritsvedzerere uye rakapfava, kutsigira kwemuviri uye kwepfungwa kumuviri wako, kuburitsa hunhu hwako hwechikadzi.
Mushure mekuchenesa kumeso kwako nemaoko, donhedza madonhwe mashoma eserum paruoko rwako, wozoizora zvakaenzana kumeso kwako kubva kumeso centre kusvika kumativi maviri. Zvinyoro nyora kumeso kusvikira iyo serum yanyura zvachose.
Zano: ndapota edza kushandisa chigadzirwa ichi panzeve kumashure kweganda. Kana paine kusagadzikana kuita kana kusagadzikana, ndapota rega kushandisa.
Ndokumbirawo muise ichi chigadzirwa munzvimbo yakaoma uye inotonhorera.
Kubva paongororo dze 53
Kusvika kunonoka (1 mwedzi). Ini handisati ndaiyedza izvozvi. Asi mune zvakakwana mamiriro
Akanaka kumeso kirimu
Zvakanditorera mwedzi nehafu kuti ndisvike kuSpain. Yakakwana yakazara, hapana kuputsa.
Kureba kwenguva refu, ingangoita mwedzi miviri, yakawana zvese zvakakwana, zvisati zvashandiswa
Ini ndinoshandisa iyi serum mazuva ese saka ndakaraira mabhodhoro maviri nguva ino kuti ndirege kumhanya nawo nekukurumidza. Iwo odha yakachengetedzwa chaizvo uye yakasvika mushure memazuva makumi mana. Ini ndinokurudzira zvikuru chitoro.
Machenda anotarisa isu 4.9 / 5 inotarisana neongororo dze 124549.
BF Style Lantern Yakareba Sleeve Lapel Vakadzi Corduroy Jacket
Smart 360 Degrees Silicon Ultrasonic Chikwambo Chemazino Kune Vana
Chishamiso, chinosetsa, chakasununguka kuvana, zvisinei nemaoko avo madiki vanogona kuibata nyore, yakakwana kwavari kuti vave nemazino akachena kwese kwese, ndiyo yechipiri ini